Olee otú Dochie batrị nke iPhone 6 Plus / 6 / 5s / 5c / 5 / 4s / 4
IPhone batrị nnọchi na Apple mkpọsa na-echekwa ma ọ bụ ikike na-eweta ọrụ
Apple agaghị ana ị na-eji dochie ekwentị gị batrị ọ bụrụ na ọ bụ n'okpuru akwụkwọ ikike. Ọ bụrụ na ị opted maka AppleCare ngwaahịa ka e meere ekwentị gị, ị nwere ike ịlele handset si mkpuchi nkọwa site na itinye ekwentị Oghere Usoro ọgụgụ na Apple si website.
Ọ bụrụ na gị na ekwentị bụ kpuchie n'okpuru akwụkwọ ikike, ị nwere ike ma gaa Apple si mkpọsa ụlọ ahịa na-nnọchi batrị, ma ọ bụ ịkpọlite ​​a ọrụ arịrịọ on Apple si website. Ọ bụrụ na e nweghị Apple mkpọsa ụlọ ahịa dị nso, ị nwere ike ma na-ahọrọ Apple ikike na-eweta ọrụ ma ọ bụ atọ ọzọ idozi ụlọ ahịa na-esi gị ekwentị batrị edochi.
Technicians ga-eduzi ule na batrị gị iji jide n'aka na ekwentị batrị kwesịrị nnọchi ma ọ bụ ọ bụrụ na e ọ bụla ọzọ nsogbu na ekwentị na-agwụ batrị.
Tupu ẹsụk gị ekwentị maka batrị nnọchi, ọ bụ ihe amamihe ike ndabere (mmekọrịta gị iPhone) maka ekwentị ọdịnaya. Technicians nwere ike tọgharịa ekwentị gị n'oge batrị ndochi.
Apple ebubo $ 79 maka a nnọchi batrị, ma ụgwọ a na-anọgide n'otu niile iPhone ụdị batrị. Ọ bụrụ na ị na ịtụ online site Apple si website, ị ga-akwụ ụgwọ mbupu ndebe nke $6.95, gbakwunyere ụtụ isi.
Dochie batrị adịghị achọ ihe ọmụma banyere rọketi sayensị, kama ị ga-eme ya nanị ma ọ bụrụ na ị bụ ịnụ ọkụ n'obi na-ezu. Jide n'aka na ị nwere ndabere maka dum ekwentị ọdịnaya.
Part 1. Olee dochie iPhone 6 na iPhone 6 gbakwunyere batrị
Dị ka e kwuru na mbụ, dochie iPhone batrị adịghị achọ ihe ọmụma banyere rọketi sayensị, kama ị ga-nwere ụfọdụ tupu ahụmahụ na dochie ekwentị batrị.
Na nke a batrị nnọchi ozi, ị ga-adị mkpa ise-ebe pentalobe sikruuokwomoto, obere ọkpọ sere ihuenyo, obere plastic ghota inyocha ngwá ọrụ, draya ntutu, ụfọdụ gluu, na ọtụtụ ihe, iPhone 6 nnọchi batrị.
Usoro iji dochie iPhone 6 na iPhone 6 gbakwunyere batrị bụ otu ihe ahụ ọbụna ma ọ bụrụ batrị bụ nke dị iche iche nha.
Mbụ, agbanyụ na ekwentị gị. Lee nso ekwentị àmụmà n'ọdụ ụgbọ mmiri, ị ga-ahụ abụọ obere kposara. Ihighari ha na enyemaka nke pentalobe sikruuokwomoto.
A kacha mwute akụkụ, ebe ahụ ọkpọ nso ekwentị n'ụlọ button, jide ekwentị bụrụ na aka gị na ji nwayọọ nwayọọ sere na ihuenyo na ọkpọ.
Ozugbo ọ na-amalite na-emeghe, fanye plastic inyocha ngwá ọrụ na ohere n'etiti ihuenyo na ekwentị ikpe. Ebuli ihuenyo nwayọọ nwayọọ, ma jide n'aka na ị na-adịghị ebuli ya ihe karịrị 90 degrees na-iji zere emebiri ngosi cables.
Wepụ kposara si ihuenyo efego akụkụ, unpick (iwepu) ihuenyo njikọ, na mgbe ahụ wepụ batrị njikọ site n'imezi abụọ kposara na jide ya.
Batrị bụ mmasị na ekwentị ikpe na gluu (gluu ibe ke iPhone 6 gbakwunyere), otú ịfụ draya ntutu na azụ nke ekwentị ikpe. Ozugbo ị na-eche na gluu ka ịrọ arọ, wepụ batrị nwayọọ nwayọọ na enyemaka nke plastic inyocha ngwá ọrụ.
Mgbe ahụ, n'ikpeazụ, itinye ọhụrụ batrị ikpe na gluu ma ọ bụ abụọ-kwadoro teepu. Itinye batrị si njikọ, reinstall niile kposara azụ, itinye ihuenyo njikọ, na-emechi handset site reinstalling abụọ ikpeazụ kposara odude nso àmụmà n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Part 2. Olee dochie iPhone 5S / iPhone 5c / iPhone 5 batrị
Na-obere plastic ghota inyocha ngwá ọrụ, obere ọkpọ, ise-ebe pentalobe sikruuokwomoto, na nrapado ibe njikere tupu ịmalite ozi. Jide n'aka na ị agbanyụ ekwentị gị tupu ị malite imeghe ya.
Mbụ, ihighari abụọ kposara odude nso okwu.
Mgbe ahụ, ebe ahụ obere ọkpọ na ihuenyo, n'elu n'ụlọ bọtịnụ. Jide ekwentị ikpe, na sere na ihuenyo na ọkpọ nwayọọ nwayọọ.
Jide n'aka na ị na-adịghị ebuli ekwentị na ihuenyo akụkụ site karịrị 90 degrees.
E wezụga batrị, ị ga-ahụ ya njikọ. Wepu ya abụọ kposara na ji nwayọọ nwayọọ wepụ njikọ na enyemaka nke obere plastic ghota.
Ị ga-ahụ a plastic aka uwe ọzọ na batrị. Sere a aka uwe nwayọọ nwayọọ na-batrị nke ikpe. N'ikpeazụ, dochie batrị, na itinye ya njikọ azụ. Na-etinye ndị kposara na ebe, ma na-njikere iji gị iPhone ọzọ!
Part 3. Olee dochie iPhone 4S na iPhone 4 batrị
IPhone 4 na 4S ụdị nwere dị iche iche, batrị, ma nnọchi usoro bụ otu ihe. Ị mkpa otu set ngwaọrụ, obere plastic ghota inyocha ngwá ọrụ, ise-ebe pentalobe sikruuokwomoto, na Philips # 000 ịghasa-akwọ ụgbọala.
Wepụ abụọ kposara na-emi odude nso n'ọdụ ụgbọ mmiri njikọ.
Mgbe ahụ, inupụ n'azụ panel nke na ekwentị kwupụta n'elu, na ọ ga-agafe si.
Mepee ekwentị, imezi ihe ịghasa jikọọ na batrị njikọ, ma jiri nwayọọ wepụ batrị njikọ. IPhone 4 nwere nanị otu ịghasa, ma iPhone 4 S nwere ihe abụọ kposara na njikọ.
Jiri plastic oghere ngwá ọrụ iji wepụ batrị. Wepụ ya nwayọọ, na-eji dochie ya na ọhụrụ otu!
Part 4. Olee dochie iPhone 3GS batrị
Ndokwa ngwá ọrụ dị ka akwụkwọ clip, mmiri cup, Philips # 000 ịghasa ọkwọ ụgbọala, ise-ebe pentalobe sikruuokwomoto, na plastic oghere ngwá ọrụ (spudger).
Nzọụkwụ mbụ bụ iji wepụ kaadị SIM na mgbe ahụ ihighari abụọ kposara emi odude esote n'ọdụ ụgbọ mmiri njikọ.
Jiri mmiri cup ka ji nwayọọ nwayọọ na sere ihuenyo, mgbe ahụ, na-eji plastic oghere ngwá ọrụ iji wepụ cables na itinye ngosi na osisi.
Ugbu a, ihe ndị kasị mgbagwoju anya akụkụ, iPhone 3GS batrị na-emi odude n'okpuru mgbagha osisi. Ya mere, unu mkpa na-emeghe ole na ole kposara, na-ewepụ obere cables jikọọ na osisi na njikọ ya.
Mkpa ka ị ebuli igwefoto nke ụlọ, ma jiri nwayọọ-akpali ya onwe. Cheta, igwefoto adịghị pụta; Ọ na-anọgide mmasị ka osisi, n'ihi ya, ị nwere ike dị nnọọ akpali ya onwe.
Mgbe ahụ, wepụ mgbagha osisi, ma jiri nwayọọ wepụ batrị na enyemaka nke plastic ngwá ọrụ. N'ikpeazụ, dochie batrị na-ezukọta na ekwentị gị azụ!
3 Best iPhone Data Recovery Software maka 2015
Olee otú Hichapụ Ibe edokwubara on iPhone
Otú nyefee Videos Site IPhone ka Computer N'ihi Free
Otú nyefee Ndi ana-akpo si Huawei ka iPhone
Top 10 iPhone Security Atụmatụ & Common iPhone Security Issues na amuma
Otú nyefee Music ka jailbroken iPhone
GOM Player N'ihi Mac
2 nkeji itinye gị iPhone n'ime ma ọ bụ Sinụ n'ime Iweghachite ọnọdụ
> Resource> iPhone> Olee otú iji Dochie batrị nke iPhone 6 Plus / 6 / 5s / 5c / 5 / 4s / 4